Abantu abaningi, ngisho nalabo abangebona olunzulu abathanda yezimoto, ngaphambi kokuthenga imoto ngokuphelele nesithakazelo konke ahlobene ngayo nezakhi lobuchwepheshe yayo, ukusebenziseka, nakho konke okunye kufanele kube ezithakazelisayo kumthengi ezingaba entsha yensimbi ihhashi. Yiqiniso, ungaya showroom eliseduze futhi uthole zonke kukhona nomthengisi-Umeluleki, kodwa siyini isiqinisekiso sokuthi lo muntu uzokutshela iqiniso ngokwethembeka? Yena uthola iholo ezinye, ngakho akukho lutho olungalungile, kusobala ukuthi ngeke ukwazi ukusho, futhi kwezinye izimo ngisho benza ihaba noma ngizithatha kalula (in the case of petrol). Kususelwa Kulokhu, yebo, kungcono ahlale ekhaya bese uhlole waphinda khona amaphutha athile imoto, okuyinto sembelwa umphefumulo. Ngesisekelo lesi Uhlolojikelele Ukubuyekeza Czech Skoda Fabia imoto bazothola, okumelelwe e ezahlukeneyo ezintathu emzimbeni: "Skoda Fabio" Combi (inqola), "Skoda Fabio" hatchback "Skoda Fabio" isithunywa. Buyekeza ngeke egcwele izinkomba isidina digital, futhi ngokwezinga elikhulu ngeke ukuchaza emihle nemibi umshini. Isihloko uzobe kuchazwe emotweni ukuphepha, elingaphakathi yayo futhi inobuntu obuhle ku ngokuqhathanisa isici izilinganiso "Skoda Fabia". Kusukela leli phuzu udinga shí indaba bese uzama ukuqonda konke kuchazwe.
"Skoda Fabia" Ukucaciswa - imvume
Kufanele uqale neqiniso lokuthi Skoda - Czech imoto umkhakha, okuyinto efana kakhulu German (izingxenye yemoto zivame abekwe izimoto ezifana Volkswagen). Inzuzo enkulu "Skoda Fabia" - imvume. 149 mm - lokho kuhle isikhashana endleleni amazwe CIS (kodwa namanje ngeke kukusize ngalutho-ke isifo zonke imigodi). Nale moto ekhiqizwa eziningi ukuhlolwa ukuphahlazeka, nakuba kungadingeki nakancane ekhethekile ukwenza kanjalo kwaba cha, ngoba umshini ngokwawo umndeni futhi akuhloselwe for a ride okusheshayo noma ukuthutha into esindayo. ezithakazelisayo kakhulu ukuthi uma uguqula uhlobo umzimba kushintsha kuphela ubude, nezingalo kusese imvume ukuphakama. "Skoda Fabia" inqola - okuvame kakhulu uhlobo umzimba phakathi bonke abanye.
Manje sizogxila ukuhlaziya eningiliziwe imoto nohlobo umzimba (esiteshini enqoleni). Ubude bayo 4250 mm, okuyinto icwecwe kakhulu, ububanzi - 1640 mm. Njengoba nje kulotshiwe ngaphambili, 149 mm - yilokhu ephawulwe "Skoda Fabia" imvume, okuyinto esivela ngokuphelele wonke amamodeli we izimoto. Kuyinto kule nguqulo umzimba imodeli ukunikeza induduzo enkulu, ikakhulukazi uma ucabangela iqiniso yomkhaya omkhulu noma okudingeka ukwenze zokuthutha njalo zokuthile ezinkulu. Ngokwesibonelo, ukuba baphathe izinto eziningi ukuze inkinga efanayo (abanikazi bayo enqoleni - ukhetho best of konke ungacabanga). Comfort imoto Yiqiniso, kushiya okuningi okufanele oyifunayo, donsa umlenze esihlalweni esingemuva, futhi ngokuqinisekile ayizange iphumelele. Uma siqhathanisa Skoda Fabia, isibonelo, noma Superb Oktavia, limane nje ungakhululekile kakhulu imoto ezingemuva esihlalweni isikhala, okuyinto ungacabanga. Nakuba futhi okufanayo, uma uhambo ngokuyinhloko ezinganeni, ngabo-ke kuyoba yinto nselele, futhi uyibeke lapho ngaphandle nobunzima, eye wachitha yonke uhambo induduzo. Yini enye kuziwa izinzuzo imoto, ngakho-ke unpainted umzimba ikhithi "Skoda Fabia". Ground imvume kukhulu, kodwa oqinisekisa ukuthi thina phansi ngeke uvele yimuphi imihuzuko, cha, kuyafana nje phezu kwesiyingi mikrovmyatiny unpainted nokuklwebheka ngeke ubonakale. Ngamafuphi, kumayelana "Skoda Fabia" Combi, kufanele nje kuqashelwe ukuthi imoto yakhelwe ukuvakashelwa somkhaya esiqhutshwa njalo futhi hhayi idrayivu esheshayo phakathi komuzi.
Mayelana emotweni ukuphepha nje abakwazi ukusho, ngoba, njengoba kukholelwa kanjalo ngokuvamile, umholi embonini yezimoto kulo mongo kukhona automakers eJalimane, kodwa ifektri imoto eCzech "Skoda ngokuzenzakalela" sesiqhubeke kulesi sici kakhulu phezu ambalwa eminyakeni edlule lomsebenzi elikhiqizayo lonke ithimba amabhizinisi zezimboni . Esikhathini version entsha ye imoto eziningi izici amasha aye anezelwa, okwandisa ngokucacile nokuphepha yayo. Ukuze uqalise ukutshela mayelana banal kakhulu - engezwe ku- i-airbag ukuze bathole izihlalo kuqala nangasemuva, ngakho wahlala khona manje futhi ephephile ngempela. Ezinganeni endaweni ekhethekile emotweni lwaqala, lapho ungakwazi unamathisele esihlalweni ingane, futhi, ngokusho izibalo, omama ngempela nje okufanayo mayelana nokuphepha kwezingane zabo, baye baqala ngenkuthalo ukuthenga lokhu model of Skoda.
Kuzo zonke izici lobuchwepheshe zazo ethulwa kule moto, kuyafaneleka handling yayo - omunye oyinhloko, uma kungekhona inzuzo enkulu. Umshini ngokuphelele oshayelayo futhi kufanelekile lula abayenzayo. Kodwa kule amaCzech namaRomany "sverhupravlyaemosti" babe kanye lokususa omkhulu, okuyinto kakhulu umzamo ku umgibeli induduzo. Bedlula abanye esigabeni okungekuhle komgwaqo, umshini is okuhambisa ngokugcwele zonke semfene wabona ngaphansi amasondo.
Futhi kudingeka siyinake futhi ingaphakathi Skoda Fabia, elitholakala kuwo umthengi 3 amazinga ayisisekelo ngombala - Elgance, Ukuvelela, esebenzayo. Kubuka salon, wonke umuntu angakhetha yini ayithandayo, abangekho ukhathazwa ikhanda global nemibi zilwane. I-Chrome ufaka ngokuvumelanayo kufanelekile futhi unike obugagu kanye ukukhanyisa amadivayisi kusukela esizalwa naso Skoda baba ukukhanya oluhlaza okwesibhakabhaka, unezela amanothi isithakazelo design. Interiors sekukonke Skoda Fabia kuyinto nenhle kakhulu futhi amahle, kodwa ngesikhathi esifanayo oluphakeme elula. Le nhlanganisela ikuvumela ukuba ukugibela isimo ubukhazikhazi ngoba imali ingenkulu kakhulu.
Skoda - carmaker Czech, okuyinto kakhulu othanda bonke olusha futhi silungele ukuthuthukisa ijubane elikhulu kakhulu. Skoda Fabia - imodeli imoto, okuyinto ngokuphindiwe sezithotshiselwe phansi ukulungiswa ehlukahlukene ngcono, ngakho-ke pretty eduze irhuluphelo imoto ekilasini yayo. Lesi sihloko sachaza izinzuzo zokufakaza "Skoda Fabia": imvume, usayizi, ukuphepha, izinto ingaphakathi. Lolu lwazi zingakhiqiza kukhethwa izimoto ngaphambi kokuthenga uhlobo yesiqondiso ezindabeni zokuhweba imoto emhlabeni. In an icala ngokwedlulele, uma isihloko alinikezi ngolwazi olwanele noma bengaqondi, ungakwazi sifune usizo isiqophi ukubuyekezwa, lapho imoto hhayi nje ngidlula Hlola, ngathola ukuhlolwa ezinhle kakhulu. Ngokuvamile, ihlala yodwa ukuthi ngifisele abafundi kulesi sihloko abazange sikhethe okungalungile futhi, yebo, sikufisela inhlanhla endleleni, uqaphele! Godspeed.
Imoto ye-Subaru XV: i-hatchback ekwazi ukunqoba izithiyo ezinzima kakhulu
Phezulu encwadini iphupho. Izindlebe ngephupho. Kungani baphupha ezindlebeni?